dia sahirana ireo mpanao gazety tonga teny an-toerana namantatra ny tena votoatin’ny tombontsoa tian’ity olom-panjakana teo aloha ity holazaina. Aoka ianareo ray aman-dreny, hoy ny tenany, tsy handrebireby ny tanora ka hilaza fa tsy misy tombontsoa ho antsika izao fihaonamben’ny frankofonia raisina eto amintsika amin’izao fotoana izao. Tombontsoa ao anatin’izy ity, hoy izy, dia firaisankina, fifanakalozana ary misy eo amin’ny lafiny toekarena koa dia famoronana asa. Anisan’ny nahitana izany resaka famoronana asa izany, hoy izy, izao ny fifanarahana 22 nifanaovana tamin’ny Maraokanina. Tsy nisy moa ny ohatra mazava nomen’ity olom-panjakana teo aloha ity mikasika ireo lafin-javatra ireo fa dia midadasika be tahaka izay fotsiny no nilazany azy.